Iyo 2020 yepamusoro yeGoridhe Mutambo yekutanga kwevarume nevakadzi fashoni, zvipfeko uye bhutsu kushambadzira, kusanganisira majasi epamusoro, mateki, magirazi ezuva uye zvimwe zvinoderedzwa pazvipfeko, shangu uye zvishongedzo Tsvaga akanakisa epamberi fashoni, zvipfeko uye shangu zvibvumirano paAmazon Prime Day, anosanganisira kunyanya ...
Chirevo che "Global Sports Bicycle Eyewear Market" chirevo chinopa huwandu hukuru pamamiriro eindasitiri uye yakakosha sosi yehungwaru nekutungamira kumakambani nevanhu vanofarira musika. Chirevo chekutsvaga pamusika wemagirazi emabhasikoro emitambo inosanganisira kutyaira ...
Nderupi Rudzi rwezuva raunoda Kupfeka kune iro Ramangwana?
Pane imwe nguva, isu tese takanzwa kuti vasikana vakuru vakapfeka magirazi vaive maNerds, vachinzwa kusagadzikana uye kushaya pfungwa yekuseka. Nekudaro, mumakore achangopfuura, mazhinji makuru emhando yemabhururu akavatsigira, uye magirazi ayo munhu wese aisada akangoerekana ava zvinhu zvemafashoni uye ikava ...
Iwe uchiri kusarudza echinyakare kutenderera uye mativi egirazi?
Magirazi egirazi ave chimwe chezvinhu zvinodiwa mumugwagwa. Iwe uchiri kusarudza echinyakare kutenderera uye mativi egirazi? Paunenge uchifamba mumugwagwa, chinhu chekudzivirira maziso ndiwo magirazi ezuva. Munguva pfupi yapfuura, fashoni yemafuremu asina kufanira akaridzwa chinyararire muindasitiri yezvishandiso. Izvi ...
Mune maonero akakurumbira, magirazi ezuva ari "zvishongedzo zvezhizha", asi iwe waizviziva? Ultraviolet mwaranzi munguva yechando inokuvadzawo kumeso. Kunyangwe pazuva rine makore, UVA uye UVB zvicharamba zvichisvika kumeso ako. Muchokwadi, maziso edu akasimba uye haana kusimba munguva yechando. Kune rimwe divi, b ...
Magirazi ezuva anewo "sherefu hupenyu"
ne admin pane 20-08-05
Kusarudza magirazi ezuva akakodzera, anotevera matipi anokosha anofanirwa kuchengetwa mupfungwa: UV kudzivirira: Sarudza magirazi ezuva anokwanisa kuvhara 99% ~ 100% UVA uye UVB radiation. Saizi yemagirazi ezuva: tenga magirazi ezuva akakura. Yakakura-saizi magirazi ezuva anofukidza huwandu hwakawanda uye anobatsira kudzikisa t ...
Magirazi egirazi, serudzi rwemagirazi-anodzivirira zuva, ndeemhando yezvidziviriro zvemuviri wemunhu. Basa hombe remagirazi ezuva nderekudzivirira kutsamwa uye kukuvara kunokonzerwa neiyo yekunze ultraviolet mwaranzi kumeso evanhu uye nekupa yakagadzikana mamiriro ekuona. Pasina yakakodzera prot ...